Nagu saabsan - Guangzhou Danye Optical CO., LTD
Guangzhou Danye Optical CO., LTD waxaa la aasaasay 2010, oo ku taal Guangzhou China, waa tayada sare ee xirfadleyda quruxda aan qalliinka ahayn iyo soo saaraha qalabka caafimaadka iyo dhoofiyaha. Ganacsigeennu wuxuu u dhexeeyaa cilmi-baaris asal ah, horumarin, soo-saar, iibin caalami ah & suuqgeyn, adeegyada kadib tababar xirfadeed;
Daanye wuxuu leeyahay koox shaqo khibrad leh, iibkeena xirfadeed, farsamo, shaqaalaha waxsoosaarka waxay leeyihiin in kabadan 15 sano oo waayo aragnimo ah soosaarka quruxda, marka waxaan kaheli karnaa xal dhameystiran barnaamijka softiweerka, qalabka, naqshadeynta jirka, qaabeynta qaabeynta macaamiisha loo habeeyay Adeegyada OEM, ODM ama aad rabto nooc ganacsi oo nooc ah;
Qalabkayaga ugu muhiimsan waxaa ka mid ah laser-ka 808nm diode ee timaha ka saarista, thermagic RF ee wajiga kor u qaadista iyo adkeynta, tikniyoolajiyad cusub 6.78Mhz monopolar RF maqaarka qaadista & duuduubka mashiinka, 360 cryolipolysis platformka jirka oo yareynaya iyo qaadista, CO2 jajabka laser ee maqaarka dib u soo celinta iyo daaweynta xubinta taranka, diode laser iyo q biiro laser 2 2 1 ee timaha daaha iyo ka saarista tattoo, IPL / Elight OPT SHR ee dib u cusbooneysiinta maqaarka, Q beddelaadda laser ee ka saarista tattoo, Mashiinka qaboojinta hawada ee maqaarka qaboojinta, qalab fara badan oo lagu xalliyo dhibaatada maqaarka ee kala duwan, HIFU system iyo wixii la mid ah on;
Mashiinadeenu waa CE, patent, ROHS oo la ansixiyay, Danyena waa SGS iyo TUV oo alaab-qeybiyaha la hubiyo, waxaan haynaa 11 sano oo ganacsi caalami ah oo dhoofinta, mashiinada ayaa caan ka ah dalal kala duwan oo adduunka ah. Waxaan nahay lagu kalsoonaan karo oo lagu kalsoonaan karo.
Waxaan bixinaa adeegga iibka kadib heer sare. Mashiinnada waxay ku raaxaystaan ​​dammaanad dheer iyo taageero farsamo waqtiga nolosha ah.Waxa ku jira laakiin aan ku xaddidnayn adeegyada soo socda.
1. Buugga isticmaalaha
2. 24-saac taageero khadka tooska ah
3. Qaybo bilaash ah
4. Taageero farsamo oo fiidiyoow ah
Jidka quruxda, waxaan had iyo jeer ku dhegannahay mabda'a ah "tayada ugu horreysa, adeegga ugu horreeya", oo waxaan si joogto ah u horumarinnaa una cusboonaysiinnaa aaladda si aan ula kulanno macaamiisha!
Hadaad na jeceshahay, fadlan nagu soo biir, Danye wuxuu si kal iyo laab ah u rajeynayaa inuu la furo mustaqbal qurux badan adiga oo aad u weyn!